प्रस्तावित राजदूत डा. युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध उजुरी – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७७ कार्तिक ३ गते १८:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतविरुद्ध संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिमा चार वटा उजूरी परेका छन् । अमेरिकाको लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाविरुद्ध तीन र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध एक उजूरी परेका छन् ।
सरकारले असोज १५ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडा, बेलायतका लागि पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइको लागि समितिसमक्ष नाम पठाएको थियो ।
उजूरीकर्ताको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर नखुलेकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत उनिहरुलाई बोलाउन परेकाले त्यसको सूचना मङ्गलबार प्रकाशन गरिने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । समितिले प्राप्त उजूरीमाथि छलफल गर्न यही कात्तिक १७ गते समितिको बैठक डाकेको छ ।
योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि प्रस्तावित व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त हो–होइन ठहर्याई आवश्यक निर्णय लिनेइ छ । प्रस्तावित नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । – रासस